Sarara Bilbilaa Odeeffannoo COVID-19
Waa’ee COVID-19 gaaffiilee yoo qabaattan, 1-800-525-0127 irratti bilbiluudhan 7 irratti cuqaasaa. Isaan yeroo deebisan, tajaajiloota hiikaa afaanii argachuudhaf afaan keessan dubbadhaa. Sararri bilbilichaa kan hojjatu Wiixata 6 a.m. hanga 10 p.m. fi Kibxataa hanga Dilbataa (akkasumas guyyoota ayyaana waggaa kabajaman) 6 a.m. hanga 6 p.m. dha.
Manaa bahuu kan hin dandeenye fi talaallii COVID-19 kan barbaadan?
Galma'udhaaf karaan sadii jiru. "(Ingiliffaan) yookan sarara gargaarsaa COVID-19 1-800-525-0127 bilbiluun 7 gadi qabaa
Talaallii Koronavaayirasii (COVID-19)
Waa'ee talaalliiwwan COVID-19 irratti odeffannoo ammaa fi bal'aa argachuudhaf, maaloo toora internetii afaan keessaniin daawwadhaa: Odeeffannoo Talaallii COVID-19:
Mallattoolee dhukkubaa, mallattoolee fi ittisa COVID-19
Mallattooleen dhukkubaa COVID-19 ijoon kanneen armaan gadiiti:
Ho'insa qaamaa yookin qorruu, qufaa, hafuura kutuuu yookin harganuu dadhabuu, dadhabbii, dhukkubbii maashaa yookin qaamaa, bowwoo mataa, foolii yookin dhandhama nyaataa dhabuu, dhukkubbii qoonqoo, funyaan cufuu yookin dhangala’aan karaa funyaanii bahuu, ol deebisuu yookin hoqii fi albaatii.
Yoo isin mallattoolee akeekkachiisaa hatattamaa COVID-19 armaan gadii argitan gara 911 bilbilaa.
Hafuura baafachuu dadhabuu
Dhukkubbii ykn dhiibbaa laphee dhaabbataa
Hidhiiwwan ykn fuula cuquliisa
Gareewwan kamtu balaa irra jiru?
Ga'eessota umuriin isaanii guddaa ta'an, namoota umurii hundaa kan haalota fayyaa armaan gadii qabanii fi dubariin ulfa taate dhibee hamaa COVID-19 tif balaa caaladhaf saaxilamuu malu.
Dhukkuba Koroonaavaayirasii Haaraa (COVID-19) (Ingliffa qofa)
COVID-19 dha moo qofaadha?
Ani akkamittan ofii fi maatii kiyya eeguu danda'a?
Talaallii fudhadhaaa akkasumas ulaagaa yeroo guuttan talallii dandeetti dhukkuba ittisuu dabalu fudhadhaa.
Yoo dhukkubsattan mana turaa.
Yeroo bakka wal geettii namni itti baay’atutti deemtan haguuggii afaanii fi funyaanii fayyadamaa akkasumas faana ja'a (meetiroota lama) namoota biroo irraa fagadhaa.
Namoota baay'ee fi iddoowwan sirriitti qilleensan hin afarsamne deemuu irraa of qusadhaa.
Harka keessan irra deddeebi'uudhan dhiqadhaa ykn sanitaayizerii harkaa fayyadamaa.
Yeroo qufaatanii fi haxxiffattan ciqilee keessaniin ykn sooftiidhaan haguugaa.
Fuula, afaan, funyaan ykn ija keessan tuqinaa.
Fuulota mana keessanii qulqulleessaa.
Yoo isin mallattoolee COVID-19 qabaattan, ogeessa fayyaa keessan wajjiin haasa'aa. Yoo isin ogeessa fayyaa kan hin qabne taatan, wiirtuu eegumsaa hatattamaa ykn wiirtuu fayyaa hawaasaa dhiyoo keessan jiruu dubbisaa. Inshuraansii yoo hin qabdan ta’e, qajeelcha fayyaa naannoo keessan dubbisaa.
Qorannoo COVID-19 Taasisuu
Waa'ee qorannoo COVID-19 taasisuu irratti odeffannoo ammaa fi bal'aa argachuudhaf, maaloo toora internetii afaan keessaniin daawwadhaa: Odeeffannoo Qorannoo COVID-19:
Adda of Baasuu fi Kophaa Turuu:
Jechootni kunniin maal akka ta’an caalmaatti baruudhaaf, akkasumas yeroo hangamii akka adda yookan kophaa of baastan baruudhaaf maaloo fuula Herregduu Adda of Baasuu fi Kophaa Turuu ilaalaa.
Fayyadama haguuggiiwwan afaanii fi funyaanii
Haguuggiiwwan afaanii fi funyaanii namni COVID-19 dhan qabame yeroo dubbate, qofa'e ykn haxxifate vaayirasiin gara qilleensatti akka hin gadhiifamne hir'isa. COVID-19 dhan qabamuu fi mallattoolee salphaa qabaachuu ykn hooma dhabuun ni danda'ama. Haguuggii afaanii fi funyaanii fayyadamuun COVID-19 osoo hin beekin namoota birootti akka hin dabarsine ni ittisa. Dhukkubni isiniif salphaa ta'e nama biraa ajjeessuu ni danda'a.
Kanneen armaan gadii gorsoota haala fayyadama haguuggii afaanii fi funyaanii irratti kennamani:
Haguuggin afaanii fi funyaanii afaanii fi funyaan keessan haguuguu fi cinaawwan lamaan fuula keessaniitti sirriitti ta'uu qaba.
Haguuggii afaanii fi funyaanii godachuudhan qabattoo gurra irratti godhamuu fayyadamuudhan baasaa, akkasumas fuldura haguuggii afaanii fi funyaanii ykn fuula keessan hin tuqinaa.
Guyyaa itti fayyadamtan hunda haguuggiiwwan afaanii fi funyaanii adeemsa fayyaa gataa ykn haguuggii fuulaa miicaa, akkasumas harka keessan irra deddebi'uudhan dhiqadhaa.
Daa'imman umurii lamaa gadi ta'an haguuggii afaanii fi funyaanii tasumallee godhachuu hin qaban. daa'imman umuriin isaanii 2 hamma 4 ta'e yeroohaguuggii afaanii fi funyaanii godhatanitti hordoffii ga’eessotaa qabaachuu qabu.
Ajajootni haguuggii afaanii fi funyaanii namoota haalota fayyaa muraasa qabaniif hojiirra hin oolu. Yoo isin yaaddoo qabaattan, wanta isiniif hunda caalaa baay'ee gaarii ta'e baruuf doktora keessan dubbisaa.
Kuusawwanii fi iddoowwan namoonni baay'een jiran haala of eeggannoo qabuun daawwachuu
Ofii keessanii fi namoota biroo eegudhaf manaa bahuu keessaniin dura, yeroo baatan ykn erga baatanii booda wantooni ilaalcha keessa galchuu dandeessan baay'een ni jiru.
Bahuu keessaniin dura:
Yoo danda'ame, yoo dhukkubsattan gara kuusaa ykn iddoo namoonni baay'een jiran hin deeminaa. Miseensi maatii ykn hiriyaan keessan mi'a kka isiniif fidan gaafadhaa.
Kuusan nyaataa, qorichootaa fi mi'oota biroo sarara irraan gara mana keessanii akka isiniif fiddan ajajuu ilaalcha keessa galchaa.
Sagantaawwan addaa mirkaneessaa. Kuusawwan namoota umuriin isaanii 65 ol ta'anii fi haalota fayyaa murta'aa ta'an qabaniif sa'aawwan hojii addaa kennuu danda'u. Yoo danda'ame, yeroowwan namoonni baay'een hin jire gara kuusaa deemuu itti yaadaa.
Mana keessanii bahuu keessaniin dura harka keessan dhiqadhaa.
Yeroo manaan ala taatan:
Haguuggin afaanii fi funyaanii, afaanii fi funyaan keessan akka haguuguu taasisuun fayyadamaa.
Isinii fi namoota biroo gidduu hiriira kaffaltii irrattilee yoo xiqqaate tarkaanfii ja'a (meetiroota lama) fagaadhaa.
Qufaa fi haxiffannaa keessan haguugaa.
Fuula keessan hin tuqinaa.
Yoo bittaadhaf baatan, qabannoo harkifamtuu ykn guuboo bittaa qulqulleessuf saanitayizerii harkaa ykn qulqulleessituu farra ilbiisota dhukkuba fidanii fayyadamaa.
Yeroo gara manaa galtan:
Haguuggii afaanii fi funyaanii huccuu keessan miicamuu fi of eeggannoon olkaa'amu adda baasaa fi haguuggii afaanii fi funyaanii keessan kan gatamu taanan gataa.
Harka keessan dhiqadhaa.
Shaakkalliiwwan nageenyummaa nyaataa gaggeessaa. Oomishoota nyaataman farra ilbiisotaatin hin tuqinaa. Kuduuraalee fi Muduraalee akkuma barame dhiqaa.
Gorsoota bittaa kuusaa nyaataa fi dhugaatii COVID-19. (Ingliffa qofa)
Namoota balaa guddaa dhibee hamaa qaban
Namoonni balaa olaanaa dhibee hamaa qaban of eeggannoo dabalataa godhuu ni danda'u.
Gorsa yeroo barbaaddan ogeessa fayyaa keessan qunnamaa. Kilinikoonni muraasni qunnamuudhaf "Poortaaliiwwan dhukkubsataa" fayyadamu, akkasumas baay'een isaanii hojjettoota bilbiloota deebisanii fi gorsa kennan qabu. Haa ta’u malee, hojiin isaanitti baay'achuu akka danda'u hin hir'anfatinaa.
Qorichoota yeroo baay'ee isin barbaachisan tarreessaa, akkasumas dukkaanni qorichaa ykn ogeessi fayyaa keessan akka dhiyeessa dabalataa kan qorichoota ajaja ogeessa fayyaa akka qaban beekuf gaafadhaa. Qorichootaa ykn gargaartuuwwan nyaataa biroo isin fudhattan galmeessuu itti fufaa akkasumas haalota amma keessa jirtan akka ajajamtaniin hordofaa.
Talaalliiwwan gorfaman hunda irratti odeeffannoo haaraa argadhaa. Ulaagaa yeroo guuttan talaallii COVID-19 fi kan dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu fudhachuu keessan mirkaneeffadhaa. Dhiyeessitoota Talaallii dhiyoo keessan jiran argachuuf as irratti cuqaasaa.
Yoo isin kophaa turuun ykn adda of baasun isin barbaachise nyaataa fi oomishoota qulqullina dhuunfaa gahaa ta'e qabaachuu keessan mirkaneessaa.
Nama isin gargaaruu danda'u tokko adda baasudhaan isin akka fayyaa taatan mirkaneessudhaf bilbila keessan irratti akka bilbilan gaafadhaa. Namni kuni yoo isin fayyummaan isinitti dhagahamuu baate isin daawwachuu akka hin qabne hubachuu isaa/ishee mirkaneessaa.
Fayyaa keessan hordofuudhan barbaachisaa yoo ta'e gargaarsa fayyaa gaafadhaa.
Ulfa, daa'imman fi COVID-19
Yoo isin amma ulfa taatan maal beekuu akka qabdan
Namoonni amma ulfa ta'an ykn dhiyootti ulfa ta'an namoota biroo wajjiin yeroo ilaalaman balaa olaanaa dhibee hammaataa COVID-19 qabu.
Namoonni ulfa ta'anii COVID-19 dhan qabaman balaa olaanaa yeroon dura dursanii dhaluu (daa'ima torbanoota 37 dura dursanii dhaluu) fi daa'ima du'e dhaluu qabu, akkasumas rakkoowwan fayyaa wal-xaxaa yeroo ulfaa birootif balaa olaanaa qabaachuu danda'u.
Namoonni ulfa ta'an ykn yeroo dhiyoo ulfa ta'anii fi namoonni isaan wajjiin tuttuuqqii qaban COVID-19 dhan qabamuu irra of ittisuuf sadarkaawwan kanneen hordofuu qabu.
Talaallii fi humneessituu fudhadhaa.
Haguuggii afaanii fi funyaanii godadhaa.
Namoota biroo irraa tarkaanfii 6 fagaadhaa, akkasumas iddoo namoonni baay'een jiranii fi haala gaariidhan qilleensan hin afarsamne deemuu irraa of qusadhaa.
Namoota birootti akka hin dabarsine ittisuuf qorannoo taasisaa.
Harka keessan irra deddeebin dhiqadhaa, akkasumas yeroo qufaatanii fi haxxiffattan ciqilee keessaniin ykn sooftiidhaan haguugaa.
Mana keessan wal irraa osoo hin kutin qulqulleessaa akkasumas farra ilbiisotaatin qulqulleessaa.
Fayyaa keessan guyyaa guyyaadhan hordofaa.
Ulfa ta'uu keessan irratti yaaddoowwan kamiyyuu yoo qabaattan, yoo dhukkubsattan ykn yoo COVID-19 dhan qabameera jettanii yaaddan battalumatti ogeessa fayyaa keessanif bilbilaa.
Ulfa fi Talaallii COVID-19
Talaalliin COVID-19 namoota ulfa ta'aniif, harma hoosisaniif, amma ulfa'uudhaf yaala jiran, ykn gara fulduratti ulfaa'uu danda'aniif ni gorfama.
Ragaan waa'ee nageenyummaa fi bu'a qabeessummaa talaallii COVID-19 yeroo ulfaa dabaleera. Deetaan bu'aawwan talaallii COVID-19 fudhachuu balaawwan yeroo ulfaa beekaman ykn gahuu danda'an kamiyyuu akka caalu agarsiisu.
Namoonni ulfa ta'an yeroo ulaagaa guutan talaallii COVID-19 dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu fudhachuu qabu.
Talaalliwwan COVID-19 namoota ulfa ta'an ykn daa'imman isaanii dabalatee dhibee COVID-19 hin fidu.
Yeroo ammaa kana ragaan talaalliiwwan COVID-19 dabalatee talaalliwwan kamiyyuu rakkoo dhala godhachuu dadhabuu dubartoota ykn dhiirotaa akka fidan agarsiisu hin jiru.
Ulfa kan taatanii fi waa'ee talaallii COVID-19 irratti gaaffilee dabalataa qabduu? Dhiyeessitoota eegumsa fayyaa ykn MotherToBaby ogummaan isaanii gaaffilee keessan bilbilaan ykn chaatiidhan deebisuuf kan argamaitti himaa. Tajaajilli iccitii bilisa ta'e Wiixata-Jimaata, 8 a.m. hanga 5 p.m. ni argama tamsaasa kallattiitin chaatii gochuudhaf MotherToBaby (Haadha irraa gara Daa'imaa) daawwadhaa ykn imeelii ergaa ykn gara 1-866-626-6847 tti bilbilaa (Ingliffaa fi Ispaanish qofaan argama).
Yoo isin COVID-19 qabaattan daa'imman haaraa dhalataniif eegumsa gochuu
Daa'imman haaraa namoota yeroo ulfaa COVID-19 dhan qabaman irraa dhalatan baay'een yeroo dhalatan COVID-19 hin qaban.
Daa'imman haaraa dhalatan kan COVID-19 dhan qabaman baay'een mallattoolee salphaa qabu ykn hooma hin agarsiisne, akkasumas fayyaniiru. Gabaasonni daa'imman haaraa dhalatan muraasni dhukkubbii COVID-19 hamaa akkka agarsiisan ibsa.
Yoo isin COVID-19 dhaf kophaa turaa kan jirtan taatanii fi daai'ma haaraa dhalate qabaattan, yeroon kophaa turuu keessan hanga dhumutti of eeggannoowwan duurfamanii godhafaman hordofaa:
Mana turaa akkasumas namoota maatiidhan ala ta'an irraa fagaadhaa.
Miseensota maatii hin qabamne biroo irraa kophaa turaa (of fageessaa), akkasumas iddoowwan namoota biroo wajjiin itti fayyadamtan keessatti haguuggii afaanii fi funyaanii godadhaa.
Nama kunuunsa kennuu fayya qabeessa kan ta'ee fi kan guutumaan guututti talaallii fudhatanii fi balaa olaanaa dhukkubbii hamaa hin qabne daa'ima haaraa dhalateef/tteef kunuunsa akka kennu godhaa. Yoo kan danda'mu ta'e, kunuunsa kennaan biraa daa'imaaf kennuu akka danda'u aannan keessan baasaa. Foormulaadhan yoo nyaachisaa kan jirtan ta'e dhiyeessan kunuunsaa fayya qabeessaa ta'e akka qopheessu taasisa.
Yeroon kophaa turuu keessan dhumuu isaatin dura daa'ima haaraa dhalate keessan kunuunsun dirqama yoo ta'e, yeroo daa'ima keessan nyaachistan ykn baattan haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuu dabalatee of eeggannoowwan duurfamanii godhaman kan gorfaman hordofaa.
Daa'ima haaraa dhalate keessan mallattoolee COVID-19 qabaachuu isaa hordofaa.
Ulfa, Da'umsaa fi daa'ima keessan COVID-19 qabamuun isaa/ishee shakkame ykn mirkanaa'ef kunuunsa gochuu (Ingliffa qofa).
Ragaan yeroo amma akka agarsiisutti aannan harmaa vaayirasii gara daa'immaniitti dabarsuuf carraa akka hin qabu. Qorannoowwan yeroo dhiyoo namoonni talaallii COVID-19 fudhatan farraa ilbiisota dhukkubaa fidan ittisan kara aannan harmaatin gara daa'ima isaanii akka dabarsan agarsiisu. Yoo isin COVID-19 qabaattanii fi harmaa hoosisuu filattan:
Harma hoosisuu keessaniin dura harka keessan dhiqadhaa
Yeroo harmaa hoosistanii fi daa'ima keessan irraa tarkaanfii 6 keessatti yeroo argamtan haguuggii afaanii fi funyaanii godhadhaa.
Sararri ho'aan gargaarsa Maatii nama ulfa taate ykn maatiiwwan haaraa kamiyyuufu ykn jalallee isaanii gargaarsii fi odeeffannoon fayyaa sammuu isaan barbaachisuuf ni argama. Gara 1-888-404-7763 bilbilaa, Wixata- Jimaata 9 a.m.- 4:30 p.m. (Ingliffaa fi Ispaanishii qofaan argama). Sararri Ho'aan keenya hojjattoota hawaasaa, ogeessa fayyaa eeyyama qabu ykn maatii dhiphina/yaaddoo daa'umsa booda isaan qunnameen kan guutameedha. Bilbiloonni sa'aawwan boda taasifaman hanga danda'ametti dafanit deebi'uu. Bilbilaa, ergaa barruu ergaa ykn warmline@perinatalsupport.org irratti imeelii nuuf ergaa.
Mataa keessanii fi maatii keessaniif kunuunsa gochuu
Washington Listens (Washington ni dhaggeeffata): Waa'ee dhiphina COVID-19 tin dhufe nama tokkotti haasa'uun yoo isin barbaachise gara Washington Listens 1-833-681-0211 irratti bilbilaa. Yeroo hundaa Wiixataa hanga Jimaatati 9:00 a.m. irraa hanga 9:00 p.m ti fi dhumtorbee irratti 9:00 a.m. irraa hanga 6:00 p.mtti TTY itti namni waliin haasoftan tokko ni jira akkasumas tajaajiloonni afaan argachuu ni jiru. Akkasumas fayyummaa sammuu fi miiraatif qabeenyota dabalataa asitti argachuu ni dandeessu (Ingliffa qofa).
Haala dhukkuba daddarbaa amma kanaa irrattii fi gorsoota dabalataa odeeffannoo miidiyaa amanamaa, ejensiiwwan fayyaa uummataa fi naannoo, akkasumas toora interneetii fayyaa uummaataa irraa haaromfama jiruu argachuudhaf odeeffannoo argachaa turaa.
Qabeenyota hawaasaa kanneen akka lakkoofsota bilbilaa, toorota internetii fi akkaawuntiiwwan miidiyaa hawaasaa jiran tarreessaa. Manneen barnoota, doktoroota, dhaabbattoota fayyaa uummataa, tajaajiloota hawaasaa, wiirtuuwwan hawaasaa sararawwan bilbilaa fayyaa fi rakkoo sammuu dabaluu dandeessu.
Miseensota maatii fi hiriyoota wajjiin bilbilaan ykn karaa tajaajiloota sarara irraatin qunnamaa.
Wantoota fayyaa murteessoo dhiyaatan (kan akka saamunaa, sanitaayizerii alkoolii irratti hunda'aan, sooftiiwwan, termometirii, qorichoota ho'ina qaamaa hir'isanii fi meeshalee qorannoo COVID-19 manatti taasifamuu) qabaadhaa.
Dhiyeessa qorichoota isinii fi miseensonni maatii keessan osoo adda hin kutin fudhatan qabaachuf yaalaa.
Miseensota maatii umuriidhan isinii gadi ta'an gargaaruu
Hiriyoota fi maatii isaanii wajjiin bilbilaan, ergaa barruutin, imeelidhan ykn miidiyaa hawaasaatin hasa'uun gargaarsaa fi qunnamtii itti fufiinsa qabu gaafadhaa.
Yoo oduun kan isaan dhiphisu ta'e boqonnaa fudhachuu hin hir'anfatinaa. Daa'imman keessan odeeffannoo internetii ykn maddoota odeeffaannoo biroo irraa argachuu malan ibsuufi itti haasa'aa.
Daa'imman gaaffilee akka gaafatan jajjabeessudhanii fi haala yeroo ammaa akka hubatan isaan gargaarun deeggaruu irratti xiyyeffannaa godhaa.
Miirawwan isaan qaban haasa'uun kabaja kennaafii.
Miirawwan isaanii suura kaasudhan ykn gochoota birootin akka ibsatan gargaaraa.
Akkuma barame akka itti toluu fi obsa dabalataa kennaafii.
Maatiin keessan kophaa kan turaa jiran ykn adda of baasan ta'anis, kuni yeroo gabaabadhaaf ta'uu isaa yaadadhaa.
Yeroo ciisichaa, nyaata fi sochii irratti sagantaa maatii dhaabbataa taasisaa.
Daa’imman keessaan carraa barnoota fagoo manneen barnootaa isaanitiin ykn dhaabbilee birootin kennamu irratti hirmtaatu taanan, hiriyoota isaanii wajjiin hawaasummaa akka qabaatan haala mijeessaa.
Miirawwan kan akka kophumma, nuffuu, sodaa dhukkubaan qabamuu, Yaaddoo, dhiphinaa fi sodaa deebiiwwan baramoo haala nam dhiphisisuu kan akka dhukkuba daddarbuu ta'uu isaanii beekaa.
Maatiin keessan wanta nama koffalchiisuu fi gochoota hiikaa qaban kan sonoota maatii fi addaa wajjiin deemuu akka godhan gargaaraa.
COVID-19: Odeeffannoo, Tajaajiloota fi qabeenyota Washington State keessa jiran
Hiriyootaa fi Maatii wajjiin karaa of eeggannoo qabuun akkamitti wal gahuun akka danda'amu
Muka Murtee Mallattoo COVID-19 (Ingliffaa qofaan)